Biden oo Aqbalay Musharraxnimada Madaxweyne ee Xisbigiisa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Biden oo Aqbalay Musharraxnimada Madaxweyne ee Xisbigiisa
Biden ayaa khudbad ka jeediyay shirweynaha xisbiga Dimoqraadiga oo sannadkan ahaa mid dhinaca TV-yada iyo internet-ka oo kaliya laga daawanayay sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19.
Biden wuxuu khudbadiisii dadka Maraykanka ugu sheegay inay tahay waqtigii la tuuri lahaa ama xilka laga qaadi lahaa Madaxweyne Donald Trump oo 3 sanno iyo bar xilka soo hayay.
“Inagoo isku duuban waan ka adkaan karnaa xilligan mugdiga ah,” ayuu Biden ku yidhi khudbaddiisa. Mareykanka waxaa fara ba’an ku haya xanuunka coronavirus, iyadoo malaayiin qof-na ay xanuunkaasi dartiis shaqo la’aan u noqdeen.
Biden wuxuu ku dooday in madaxweyne Trump “uusan qaadin mas’uuliyadda” faafintaanka cudurka isla markaana uu “diido inuu hoggaamiyo.”
Biden wuxuu sheegay in ilaa wakhtigan aanu “madaxweyne Trump lahayn wax qorsho ah” oo lagula dagaallamo xanuunkan coronavirus. Joe Biden wuxuu yidhi Trump “wuxuu ku guuldareystay inuu difaaco Mareykanka… taasina waa wax aan la cafin karin.”
Previous articleKursiga Xanuunka Badan Ee Xukunada!
Next articleXukuumadda Somaliland Oo Dugsi Waxbarasho Ka Hirgelisay Degaanka Macaaneeye
Xisbiga KULMIYE oo soo Dhaweeyey masuul ka Tirsanaa Xisbiga WADDANI